Amaflethi ama-Ballet azinethezekile futhi azinhle izicathulo zabesifazane. Bakha umqondo wokuzithoba nokuntuleka kokulinganisela, okubenza kube kuhle ukugqoka nsuku zonke. Nakuba, kunjalo, kunezinguqulo zakusihlwa zalesi sikhwama.
Kunemithetho eminingi okufanele uyikhumbule lapho ukhetha izicathulo. Ngaphezu kwalokho, intombazane ngayinye ibaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yini okufanele ugqoke izicathulo ze-ballet.
Okokuqala, udinga ukunaka ukuthi yiyiphi i-ballet engokwenziwe eyenziwe.
Ngokuvamile, lezi zicathulo ziyashisa entwasahlobo, hhayi ezishisayo kakhulu ehlobo noma ekwindla zakuqala - lapho izicathulo sezifihliwe kude ngaphakathi ekamelweni, kodwa izicathulo zisalokhu zisheshe kakhulu ukuqala. Ngokuvame ukugqoka ezinyaweni ezingenalutho, ngakho-ke ungabi yisisindo futhi uthenge izicathulo ze-ballet ezenziwe ngezinto ezibonakalayo kuphela, ngisho nangaphandle kokungcola okwenziwe. Isikhumba, indwangu noma ama-flats ama-ballet ama-flats azokwenza imilenze "iphefumule". Izinto zokufakelwa zingagubha unyawo. Uma kunjalo ngenxa yokuthi awufuni ukugqoka izicathulo zesikhumba futhi ugqoke kuphela okwenziwe ngezinto zokwenza izinto, bese unake izindlu ze-ballet ngokusika amaphethini noma ama-perforations okuhlobisa - ngenxa yale "imigodi" ezicathulweni kuyoba khona umoya wokuphuza umoya futhi umlenze wakho ungaphefumula ngokukhululekile.
Izicathulo ze-ballet zizoba yindlela ehlukahlukene yezicathulo zokuphuma ekukhanyeni, kodwa-ke, ngokuhamba okujwayelekile ukuthi ngeke kusebenze, ngoba zibhekene nokumelana okuphansi kokugqoka futhi ngentengo efanayo.
Izicathulo ze-ballet zesikhumba zizobonakala zihle kakhulu kumaqembu amafashini ngesikhathi sokuzilibazisa nasezikhundleni zomsebenzi emsebenzini. Ngaphezu kwalokho, ngisho nasesimo sezulu esishisayo, bavumela umoya ukuba udlule kanye nezicathulo nezicathulo. Ukuze ukwazi ukuzwa ukhululekile ku-ballet, kufanele ukhethe amamodeli asebenzayo okwenziwa ngesikhumba, hhayi kuphela ngaphandle, kodwa nangaphakathi. Izakhiwo ze-Ballet ezenziwe nge-leatherette zizo "vuka" imilenze yakho ehlobo.
Into engcono kakhulu yezingxenye ze-ballet yi-polyurethane eyaziwayo. Kuyinkimbinkimbi futhi ngesikhathi esifanayo izinto eziguquguqukayo, okubaluleke kakhulu ekuhambeni.
Yini okufanele ugqoke amaflethi e-ballet?
I-ballet yamantombazane ihamba ngokumangalisayo ephelele ngezingubo, ama-mini-dress, amafushane amfushane. Kodwa kuphela uma ungumnikazi ojabulisayo wemilenze emincane futhi enhle. Uma kungenjalo, ke kule nhlanganisela, izicathulo ze-ballet zibukeka zengeze isisindo.
Amaflethi ama-Ballet anezibhulu. Ungagqoki amaflethi e-ballet ngamagqabi ahamba emagqumeni noma, ikakhulukazi, lezo zitayela ezithinta unyawo lwakho ngokuphelele. Ngaphansi kokuvinjelwa kwemifino engavumelekile, amabhulukwe ngemicibisholo, amabhulukwe "agibela ama-breeches", amabhulukwe amabhanana, ukuhlukahluka ngesihloko sempuphu. I-simply ephelele ne-ballet jeans, i-jeans encane, "amapayipi", i-capris, igcizelela isibalo.
Amaflethi e-Ballet anezingubo. Ngisho nama-flats amahle kakhulu futhi ahlanjululwe kakhulu azoba yiqhinga elikhulu ukubuka izingubo zokugqoka. Ngokuvamile kungcono ukuthi bangagqoki nge-sarafans "phansi" (ikakhulukazi encane), ama-dresses kanye neziketi ezifanayo. Ungabathumba kuphela ngaphansi kwamamodeli avuliwe ama-sundresses, iziketi zezingubo kanye nezingubo zothando. Amaflethi ama-Ballet ayizicathulo ezilula kakhulu, okumele zihlanganiswe nezingubo zomoya.
Izakhiwo ze-Ballet nezingubo zangaphandle. Ungagqoki lesi sihlangu ngezingubo eside noma izembatho. Azihlanganisi ngesikhathi esisodwa, futhi ngaphandle kwezingubo zangaphandle, zifake izicathulo ze-ballet, kufanele zibe mfushane, intsha. Kuvunyelwe ukugqoka umsele kuze kufike emadolweni nalezi zicathulo.
Ngokuqondene nombala, nansi imithetho efanayo nezicathulo ezivamile. I-ballet yombala, ikakhulu uma ikhanya, kufanele ihlanganiswe okungenani imininingwane eyodwa yengubo yakho. Uma unesithakazelo kulokho okufanele ugqoke, isibonelo, izicathulo ezibomvu ze-ballet, bese ungakhetha amafushane amashethi ehlobo ngesitayela esithi "denim" nejezi elimhlophe okungenani nemininingwane eyodwa ebomvu. Ngokufanayo, kuyafaneleka ukubhekana neminye imibala ekhanyayo ye-ballet.
Amaflethi ama-Ballet anesisindo esidlangalaleni esanele, okuvumela ukudala isithombe esilula, nenhle. Noma ubani angawagqoka, into esemqoka ukukhetha ingubo efanele ngendlela efanele.
Ijaji likapaki lokupaka ebusika labesifazane
I-raincoat efudumele yabesifazane
Izibhulu ezifudumele ngabesifazane abakhulelwe
Lecho ne-tomato unamathisele
Indlela ukupheka rassolnik?
Abanamahloni kwengane engu-2 ubudala
Umthandazo wokuhlanzwa komndeni
Izithombe ze-Disney ezihamba phambili
Zuza kanye nokulimala kvass yasekhaya
Ikhishi ligoba ngamatshe okufakelwa
Izinzuzo zeLungu loMzimba
I-Beetle Costume ngezandla Zakho Zakho
Reiki - ukugcwaliseka kwezifiso
Amabhokisi okugcina ngezandla